गुरूप्रसाद मैनाली - मैलो बिछ्याउनामा सुतेकी लक्ष्मी जीवनको शेष घडी गनिरहेकी थिइन्। देवीरमण रोगीका सिरानमा बसेर बखतबखतमा चम्चाले पानि ख्वाउँथे। बालक पुत्र सुशील आमानेर बसेर यो चिर मातृवियोग हेरिरहेको थियो। लक्ष्मी कहिलेकाहीँ सुशीलको मुखपट्टि हेरेर बर्रर आँसु झार्थिन्। मधुरो बत्तीको धमिलो प्रकाशमा रोगीको कोठा स्मसानजस्तो देखिन्थ्यो। त्यस्तैमा दैलो उघारेर नौलीले देवीरमणलाई ढोगिदिई। नौलीलाई देखेर देवीरमणको दुःखको लहरी केही शान्त भयो। देवीरमणले भने, 'नेपालबाट कहिले आइपुगिस् नौली?'
सुरेश यक्सो - बुढाले भएको गरगहना सबै लगे। सासुससुराले पनि वास्ता गर्न छाडे। मसँग छोरालाई खुवाउने पैसा पनि हुन्थेन। कसैबाट पनि सहारा नपाएपछि आत्महत्याबाहेक अरू उपाय देखिनँ। अन्त्यमा म आत्महत्या गर्ने निर्णयमा पुगेँ। मैले पटक-पटक आत्महत्या गर्न खोजेँ तर छोरोको बिजोग हुन्छ भनेर गरिनँ। सोच्थें यदी मैले आत्महत्या गरेँ भने सौताले भोकै राख्छ। पिट्छ। साह्रै दु:ख दिन्छ भन्ने लाग्थ्यो। त्यो सम्झेर मन साह्रै रुन्थ्यो।
राज सरगम - हीरा आइपुगी पढ्न। आज त ढिलो आई, नत्र ऊ अझ छिट्टो आइपुग्थी। ऊ मेरो कक्षा साथी पनि हो। त्यति मात्रै होइन, गाउँको साथी पनि हो। अस्तिको रात पनि हाम्रै घरमा बसेकी थिई। त्यो रात हामीले नौ बजेसम्म पढेका थियौं। अरु दिन त सात बजे नै सुत्थें म। भात खानेबित्तिकै ओछ्यानमा लम्पसार भइदिन्थें।इजा कत्ति कराउनुहुन्थ्यो। बज्यै भने मेरो पक्षमा बोल्नुहुन्थ्यो— “सिन दे।” बज्यैले सुत्न दे भनेपछि इजा चुप। बज्यैको आडले अझै तङ्¥याउँथ्यो। अनि त म ओछ्यानमै खुसुखुसु चलेर घन्टौं बिताइदिन्थें। हीराले गुन्द्री समाई। मैले झोला समाएँ। तलामा टुइँटुइँ गयौं। “रामले त आउनैन भन्यो,” झोला खोल्दै हीराले भनी। Comments
राकेश कार्की - सत्ताको स्वाद चाख्न
मित्र पाठक 'राजु' - सदियौंदेखि कच्ची पुल र बर्षा थेग्न नसक्ने पीच बनाउने ठेकदारहरुको भीडमा
जसोतसो थोत्रो जिन्दगी घिसारेकै थिएँ थर्डहेन्ड आरएक्स भटभटेजस्तै
सिल्भिया प्लाथ (अनु: सुमन पोखरेल) - सन्‌ १९५६ मा सिल्भियाको भेट अङ्ग्रेज कवि टेड ह्यूजसँग भयो, र सोही वर्ष उनीहरू आपसी विवाह बन्धनमा बाँधिए। टेडको अर्की महिला आसिया वेव्हिलसँग प्रेम सम्बन्ध चलिरहेको सिल्भियाले सन्‌ १९६२ मा थाहा पाएपछि उनीहरू अलग्गिए, तर कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेद भने गरेनन्‌।
अन्जना केसी - मेरो बिहे भएको। प्रेम विवाह थियो। दीपसँग। विवाहपछि प्रेम सुखमा बिताएका थियौं। केही दिन भए पनि त्यो परम सुखलाई छिनेर दीप बाहिर जानुपर्ने भयो, पाल्न र पालिनको लागि। ऊ पैसा कमाउने अन्धवेशले विदेश गएको केही अवधिमै म र मेरो प्रेमलाई बिर्सियो। सम्पर्क नै हुन छाड्यो दीपसँग। मेरा दिनहरू झनै कष्टकर हुन थाले। निष्कृय जीवन बाँच्दै थिएँ म। मेरा चाहना, इच्छा अनि आकांक्षा मरिसकेका थिएनन्, सुसुप्त अवस्थामा थिए। जसले एउटा जीवन्त परिवेश खोजिरहेका थिए।
भक्तप्रसाद गैरे - त्यो कुर्सी नै त्यस्तो रैछ कसलाई गर्नु गालीयता कराउ उता कराउ समय बर्बाद खाली नेता त्यहाँ कति बसे सबै उस्तै अरेराजादेखि नेतासम्म सबको एउटै माली ।।
गुलजार (अनुः सुमन पोखरेल) - उनका अढाइ दर्जन गीतहरूले हालसम्ममा फिल्मफेयर एवार्डलगायत विभिन्न उपाधिहरू प्राप्त गरेका छन्‌। सन्‌ २००८ को हलिवुड फिल्म स्मलडग मिनेनियरको गुलजारद्वारा लिखित गीत 'जय हो' ले एकेडेमी एवार्डको उत्कृष्ट मौलिक गीतको उपाधि जित्यो। सोही गीतले सन्‌ २०१० मा ग्रामी एवार्डको एउटा उपाधी प्राप्त गर्‍यो।
देव सागर - एक मात्तिदै हिँडेको जोडी उसका नजरमा ठोकिन आउँछन्। उसले आफ्नो आँखा नहटाइ त्यो जोडिलाई पछ्याइरहन्छ। त्यो जोडी उसको नजिकै आउँछन्। केटाले बोलेको आवाज सुनिन्छ । संगिता! तुम मुझे कितना प्यार कर्ति हो? केटीले केटोलाई आफूतिर तान्छे र चुम्बन गरिदिन्छे । उसलाई असह्र्य हुन्छ।
बच्चु कैलाश कैनी - म बिदेशमा भएको कारणले अहिले पनि उहाँलाई एउटा चिन्ता रहेछ । मर्ने बेलामा म उहाँको साथ हुन्न भन्ने । मैले उहाँलाई सम्झाएँ । म विदेश भए पनि मेरो मन यता हजुरसँग नै हुन्छ भनें । म बिदेशमा बसे पनि बेला बेलामा उहाँलाई फोन गर्छु । त्यो कुराले भने उहाँलाई अलिकति आश्वस्त पारेको रहेछ । म जहाँ बसे पनि मेरो गाउँमा बस्ने मेरा दाई, भाउजु, काकी, माइजु, दिदी, बहिनी लगायत अरु मेरा आफन्तहरुलाई बेला बेलामा फोन गर्छु । मलाई मेरो गाउँ सम्झंदा पनि निकै रमाइलो लाग्छ । झन् उहाँहरुसँग कुरा गर्दा त निकै रमाइलो लाग्छ ।
भानुभक्त - पत्रिकाले बेरेको एक बोतल निकालेर उसले भन्यो– आयोग पढ्न थालेदेखि छोएको थिएनँ। आज खान्छु। उसले भनी– म गिलासमा हालिदिन्छु। दुई गिलासमा उसले रक्सी राखी। ‘तिमी पनि खान्छौ?’‘कहिलेकाहीँ खान्छु तर यत्रो खुसीमा नखाएर कसरी बस्न सक्छु?’ ऊ मुस्कुरायो। दुबै जनाले गिलास ठोके। रक्सीको नसामा उसले आफूलाई उसकासामू सुम्पिदिई।
इन्द्र थेगिम - फर्किँदा तिनै दाजु, बैनीसँगै बाटासम्म आउने जिद्दी कस्न थाले। मैले हार मानें। क्वाटरछेऊ आएपछि, दाजु चैंले सेतो खाम झिकेर मतिर अघि बढाए। म एकदम तर्सिएँ, ‘ए! के गर्नु भएको?’ ‘हैन सिस्टर ! हजुर आज हाम्रा लागि देवता साबित हुनु भयो। पहिलो भेटी स्वीकार्नै पर्छ नत्र हामीलाई घिट्घिटो हुनेछ।’ मेरो हातमा सेतो खाम थम्याई दिएर दाजु-बैनी टाप कसे।
माधव दाहाल - यहाँ नन्दप्रसाद मरेर के भयो र? उनकी श्रीमती त जिउँदै छिन्
एउटा अनशनकारी मर्दा केको चिन्ता यहाँ त लाखौं डकारबहादुरहरू जिउँदै छन् एउटा डाक्टर मरेर हामीलाई केही घाटा हुन्न
राकेश कार्की - उसले सपनामा
फैज अहमद फैज (अनु: सुमन पोखरेल) - सन्‌ १९४७ मा भारत विभाजनपछि उनले सेनाको जागिर छोडे र 'द पाकिस्तान टाइम्स' नामक अङ्ग्रेजी पत्रिकाको सम्पादक भए। सन्‌ १९५१ मा फैज रावलपिन्डी काण्डमा सहभागी भएको आरोपमा सुरक्षा ऐन अन्तर्गत पक्राउ परे। उनलाई जन्मकैदको सजाय दिइयो तर चार वर्षपछि छाडियो।
नवराज पराजुली - भाेली राेगहरुलाई राेग लाग्नेछ
जीवन खत्री - हो महाराज, म अपराधी हुँ'मरे मरोस्' भन्दै त्यसै नछाडिदिनुस् मलाईहोलान्, सिहंदरबारमा पुराना तोपहरूमेरै छातीमा ताकेर पड्काउनुस्।होलान्, पुराना जंगे तरबारहरूमेरै घाँटीमा निशाना बनाउनुस्।वा तातो तेलले डामेर अनुहार सिफलमा लगी झुन्ड्याइदिनुस्।
मीरा प्रसाईं - केही दिनपछि त्यो केटी गराजको छेउमा रगतपच्छे भएर लडेको देखिन रमिलाले। बगिरहेको रगत रोकिएको थिएन बलात्कार भएको अनुमान गरेर अस्पताल लगिन्। उपचारपछि होस आयो तर त्यो केटीले रमिलालाई चिन्न सकिनँ। रमिला आफैं फूपूकोमा बसेर पढ्दै थिइन्। उनले घरमा लान सक्ने आधार थिएन।
गणेश खनियाँ - धार्मिक कट्टरपन्थी र कथित उच्च जातका मानिसहरूको अगुवाइमा एउटा किताब र लेखकविरुद्व लगातार प्रदर्शन, बन्द, हडताल चल्यो। हिन्दुवादी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको अगुवाइमा उनका किताब जलाइए। पुलिस प्रशासन नै लागि पर्‍यो उनको विरुद्वमा चलेको विरोधको रापमा घिउ थप्न।
लक्ष्मण अधिकारी - पाँच वर्षअघि जेल गएकी आमा अब छुटेर आउन लागेको सुन्दा मनभित्र कहीँ खुसी भएजस्तो पनि हुन्छ तर आमाको त्यो भयानक रुप र रक्ताम्य पूजा कोठा सम्झिएपछि भने दुबैको मुटु एक्कासि ढुकढुकिन्छ। ‘भोलि तिमर्की आमा आउँदैछिन्’ भनेर काकाले सुनाएपछि दुबै दिदिबहिनी छटपटीमा छन्। अब के हुने हो उनीहरूले बुझ्नै सकेका छैनन्।
रोशन यक्सो - आक्रोशको पारोले चोमोलुङमा नाघ्नु अघि
-रमेश विकल - अन्धोको त्यो छाँटको कुरा गराइ र त्यो चेष्टा देखेर उसको नजिकैबाट हिँडिरहेकी एउटी किशोरीको मुटुभित्रबाट दबाउँदादबाउँदै पनि फुटेर निस्केको जोरको खित्काले त्यो वायुमण्डलमा सङ्गीत फुटालिदिन्थ्यो। अनि ऊ बिलकुलै बज्रमुर्खजस्तो सानीतिर अन्दाजले मुन्टो बटारेर सोध्थ्यो- ‘को सानी त्यो?... किन हाँसेको?’ ‘तिम्रो कुराको छाँट देखेर के अब। … के डोका न डालाको कुरा गर्यास त्यो।’ सानी पनि आफ्नो गुँडुल्किएको हाँसोको माध्यमबाट भन्थी।
सन्तोष चिमरिया - तीन जना मिलेर कष्टका साथ मचानमा लुकाएको कटहर मलाई हजुरबाले डोकामा हाल्देर नाम्लो लगाइदिए। भट्टराई गुरु अघिअघि म पछिपछि भएर गुरुको नासो गुरुकै घरमा छोडेर आएँ। भोलिपल्ट गुरुका घरमा कटहर फोरेछन्। एक आहरी कटहर हाम्रा पनि ल्याइदिए। अन्तअन्त पनि दिए। तर, तल्लो घरलाई दिएनन्। यसबाट मेरो रणनीतिले सम्पूर्ण रुपमा काम गरेको प्रमाणित भयो। Comments
लक्ष्मण अधिकारी - चार वर्षमा पढाइ सकेर बा–आमाको सेवा गर्न नेपाल फर्किने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेकोमा उसलाई निकै हिनताबोध हुन्थ्यो। त्यसैले ऊ केही रकम पठाएर बा–आमालाई खुसी बनाउन चाहन्थ्यो। तर, बा–आमाको मायाभन्दा पत्नीको माया नै गह्रौं भयो। मार्थालाई खुसी पार्न उसले भित्रदेखि मन कुड्याउँदै नेक्लेस किनेर निवासमा पुग्यो।
ओक्टाभियो पाज - ओक्टाभियो पाजको जन्म ३१ मार्च १९१४ मा मेक्सिकोको मेक्सिको सिटीमा भएको थियो।उनको पुरा नाम ओक्टाभियो पाज लोजानो थियो।उनी आमा जोसेफिना, फुपू एमालिया तथा हजुरबुवा इरेनियो पाजसँग मिक्स्कोआक गाउँमा हुर्किए।उनका हजुरबुवा उपन्यासकार तथा प्रकाशक थिए।मेक्सिकी तथा युररोपेली साहित्यले भरिपूर्ण आफ्ना हजुरबुवाको व्यक्तिगत पुस्तकालयका कारण पाज सानै उमेरदेखि साहित्यसँग परिचित भए।
शंकर लामिछाने - उसले बताई कि कसरी पुस्तकालयमा उसले उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीका पुस्तकहरु पाएकी र पढेकी छ, त्यस बखतका नारी पुरुष पर्दा गर्थे, उनीहरू विवाह गरी घरजम गर्थे। उसले भनी कि पर्दा, विवाह र घर शब्दका अर्थ बुझ्न उसलाई कति मेहनत गर्नुपरेको थियो। ती तीनवटै शब्दका अर्थ पनि उसले मायालाई बताई। उसले भनी कि त्यस बखत पुरुषको जिम्मा आर्थिक बोझ र स्त्रीको जिम्मा गृहस्थी थियो। ‘थाहा छ माया, तिमीलाई कि तिनताक स्त्रीले पेटमा बच्चा हुर्काउँथे र आफ्नै घरमा जन्माउँथे।’ मायालाई उसको अगाडि कसैले स्वर्गको कुनै देवदेवीको जीवनचर्या वर्णन गरेजस्तो लाग्यो।
माधव दाहाल - यसरी पल्लाघर बा आफ्ना व्यथा एकपछि अर्को गरेर मलाई सुनाउँदै थिए र भन्दै थिए, ‘मेरा हातखुट्टा चल्न छाडे। बाबु, आफैं खाना बनाएर खान सक्तिनँ। त्यो मोरो गधालाई मैले सयौंचोटि भनिसकें, बितेको कुरा गरेर केही फाइदा छैन हेर अब चाँहि आइज बाबु, आफ्नै मुलुक आइज भन्दा सुनेको नसुन्यै गर्यो।’ Comments
सुधन सुवेदी - पूर्खाका वीरताका बयान गर्दै
-धर्म सापकोटा राजु - "छोराहरु किन हामीसँग बस्न आउदैनन्? किन फर्कन मान्दैनन बिदेशबाट? के बिदेश भनेको खोलाको पानी हो र? एकचोटी बगेपछी फर्कनै नसक्ने ? " गोबिन्दबा बुढीलाई सोध्छन्। बुढी केही बोल्दीनन्। डाक्टरले उनलाई हिंड्नुपर्छ भनेको छ। घरबाहिर हिंड्दा चिसो लाग्छ,तेसैले गोबिन्दबा हरेक दिन तीन चारपटक घरको भुईतलाबाट हिंडेर माथि तला पुग्छन र बैठकमा आउँछन । उनको तीनतले घरका बाह्र कोठा मध्ये ११ कोठा खाली छन्। कोठा जस्तै खाली छ उनको मन पनि। सॉंच्चै भन्ने हो भने आजभोलि गोबिन्द बाको आंखामा कुनै सपना उम्रेको छैन।ऑंसु उम्रेको छ। Comments